अनुभुती – Ram Kumar Pariyar
Current Page: अनुभुती
२०७३ भाद्र २८
मस्तिष्कको काम सोच्ने हो । विश्लेषण गरेर सहि गलत छुट्याई सहि निश्कर्ष लिने हो । तर हामि विश्लेषण गर्ने भन्दा पनि सोच्ने काम बढी गर्दछौँ । बरु सहि गलत छुट्यादैनौ हामी , झट्ट निर्णय लिई हाल्छौँ । विश्लेषण गर्ने काममा हाम्रो अभ्यास ज्यादै कम...
२०७३ श्रावण १
बेबि , नियतीको खेल पनि क्या गजब छ हगि ? हिजोसम्म हामी अलग अलग बाटोमा थियौं । गन्तव्य पनि अलग । लाग्थ्यो तिमी पुर्व जाँदै छौ म पश्चिम । तर आज हामी एउटै दिशाको यात्री बनेका छौँ । गन्तव्य पनि एउटै । तिम्रो विचार...
२०७३ असार ३१
रामकुमार परियार गत शनिबार मैले बरदुबईमा भोगेको एउटा घटना लेख्दैछु । साँझपख म अबुधाबी फर्कने तयारीमा थिएँ । पुलिस स्टेसन नजिकैको चौबाटोमा साथीसंग गफ गर्दै थिएँ । एकजना आफुलाई भारतीय बताउने व्यक्ती मेरो सामुन्ने आयो । मेरो अनुहारमा हेर्दै तेरो अनुहारमा त डण्डिफोर र...
२०७३ बैशाख ६
कलाकारलाई नरुवाउँ , सम्मान गरौ
रामकुमार परियार हिजो साँझ ७ बजे नायिका प्रियंका कार्किले एउटा स्टाटस लेखिन । “मेरो मन रुवाउनेहरुको लागि…” भनेर । त्यो पढ्दै गर्दा मन धेरै दुख्यो । जबकी एक मिनेट पढ्दैमा मेरो मन दुख्यो भने रातदिन भोग्दा उनको मन कति रोएको होला ? हामी कलाकारलाई...
२०७२ माघ १८
‪‎कांग्रेस अधिवेशनलाई हेर्दा‬
१५ गते संपन्न कांग्रेसको गाउँ तथा नगर अधिवेशनको परिणामलाई हेर्दा केही आश्चर्यजनक चमत्कारहरु देखिए । विगत देखि रहँदै आएको संस्थापन र प्रजातान्त्रिक बिचको गुटबन्दी यसपल्ट पनि सतहमा आयो । सामाजिक संजालहरुमा आएका क्रिया-प्रतिक्रिया र संबंधित क्षेत्रकै नेता-कार्यकर्ताको धारणाले पनि यसलाई प्रष्ट पारेको छ ।...
२०७२ श्रावण १६
दुई मिनेट नेताका कुरा
मुलुकमा जबजब ठुला-ठुला राजनैतिक परिवर्तनहरु हुन्छन् त्यसको पछाडि भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिंदै आईएको छ । हरेक राजनैतिक परिवर्तनको संघारमा शिर्ष नेताहरु भारत धाएका कैयन उदाहरण छन । यसपटक पनि ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने पुर्व सन्ध्यामा हाम्रा शिर्षस्थ नेताहरु लस्करै भारत धाईरहेका छन ।...